I-Sellics Benchmarker: Uyenza njani iBenchmark kwiAkhawunti yakho yentengiso yeAmazon | Martech Zone
I-Sellics Benchmarker: Uyithelekisa njani iakhawunti yakho yeNtengiso yeAmazon
NgoLwesibini, Februwari 15, 2022 NgoLwesibini, Februwari 15, 2022 Douglas Karr
Kukho amaxesha esiye sizibuze, njengabathengisi, ukuba inkcitho yethu iqhuba njani xa kuthelekiswa nabanye abathengisi kwishishini lethu okanye kwisitishi esithile. Iinkqubo zeBenchmark ziyilelwe ngenxa yesi sizathu-kwaye iSellics inengxelo yasimahla, ebanzi yebenchmark yakho. Iakhawunti yeNtengiso yeAmazon ukuthelekisa ukusebenza kwakho nabanye.
Intengiso yeAmazon ibonelela ngeendlela zentengiso zokuphucula ukubonakala kubathengi ukuba bafumane, bakhangele, kwaye bathenge iimveliso kunye neempawu. Iintengiso zedijithali zeAmazon zinokuba yeyiphi na indibaniselwano yokubhaliweyo, umfanekiso, okanye ividiyo, kwaye ivele kuyo yonke indawo ukusuka kwiiwebhusayithi ukuya kwimidiya yoluntu kunye nomxholo wokusasaza.
Intengiso yeAmazon inikezela ngeendlela ezininzi zentengiso, kubandakanya:
Amanqaku axhaswayo Ixabiso-ngalinye-ngokuchofoza (CPC) kwiintengiso ezibonisa uphawu lwentengiso, uphawu lwesiqhelo, kunye neemveliso ezininzi. Ezi ntengiso zivela kwiziphumo ezifanelekileyo zokuthenga kwaye zinceda ukuqhuba ukufunyanwa kwegama lakho phakathi kwabathengi abathenga iimveliso ezinjengezakho.
Iimveliso ezixhasiweyo -Endleko-nganye-ngokuchofoza (CPC) kwiintengiso ezikhuthaza uluhlu lweemveliso ezizodwa kwiAmazon. Iimveliso ezixhasiweyo zinceda ukuphucula ukubonakala kweemveliso ezizezinye kunye neentengiso ezibonakala kwiziphumo zokukhangela nakwiphepha lemveliso
Umboniso oxhasiweyo Isisombululo sentengiso esibonelela ngenkonzo yakho ekunceda ukuba ukhulise ishishini lakho kunye negama lakho kwiAmazon ngokubandakanya abathengi kulo lonke uhambo lokuthenga, ngaphakathi nangaphandle kweAmazon.
Iimpawu zeNtengiso zeAmazon
Ukuze uphumelele ukhuphiswano, kufuneka uluqonde. Kwaye nantsi into eyenza isixhobo seSellics Benchmarker sibengcono kunayo nayiphi na enye into kwintengiso: iyakwenza beka ukusebenza kwakho kumxholo kwaye ubonelele ngemibono enokusetyenzwa ukwenza ukuba ube ngumthengisi onengeniso ngakumbi kwiAmazon. I I-Benchmarker yokuThengisa ihlalutya ukusebenza kwakho kwiiMveliso ezixhasiweyo, iiMveliso ezixhasiweyo, kunye noMboniso oxhasiweyo kwaye ikubonise ngqo apho wenza khona kakhulu kwaye ungaphucula phi.
Iimpawu eziphambili zeengxelo zemilinganiselo ethelekiswayo yile:
Iifomati zeNtengiso ezixhasiweyo: Ngaba usebenzisa zonke iifomathi ezifanelekileyo ezinokuthi zibonelelwe yiAmazon? Nganye inezicwangciso zayo kunye namathuba. Hlaziya iimveliso ezixhasiweyo, iiBrands ezixhasiweyo kunye noMboniso oxhasiweyo
Inqaku elinenkcukacha: Qonda ukuba ungowaphezulu kuma-20% -okanye ezantsi
Thelekisa iindleko zentengiso (I-ACOS): Ithini ipesenti yentengiso ethe ngqo oyenzileyo evela kwimikhankaso yentengiso exhaswa ngemali xa kuthelekiswa nomthengisi ophakathi? Ngaba ulondoloze kakhulu? Qonda amandla okufumana inzuzo kudidi lwakho
Benchmark kwiindleko zakho ngokucofa (CPC) Bahlawula malini abanye ngonqakrazo olunye? Funda indlela yokufumana ibhidi efanelekileyo
Khulisa iNqanaba lokucofa kwakho (CTR): Ngaba iifomati zentengiso zakho zigqithile kwintengiso? Ukuba akunjalo, funda ukuba ungawonyusa njani amathuba okufumana unqakrazo
Ukuphucula iRhafu yokuGuqulwa kweAmazon (I-CVR) Bakhawuleza kangakanani abathengi ukugqiba amanyathelo athile emva kokucofa kwintengiso. Ngaba iimveliso zakho zithengwa kakhulu kunezinye? Funda ukubetha imarike kunye nokwazisa abathengi
Ngokusekelwe kwidatha emele i-$ 2.5B kwingeniso yentengiso kwiimveliso ze-170,000 kunye ne-20,000 iindidi zeemveliso, I-Benchmarker yokuThengisa sesona sixhobo sinamandla sentengiso kwimarike. Kwaye isimahla. Indawo yentengiso nganye, ishishini, iqoqo lefomathi libandakanya ubuncinci beempawu ezikhethekileyo ezingama-20. Iiseyile ngamanani aphakathi kubuchwephesha bokunika ingxelo kubathengisi.
Umgangatho weAkhawunti yakho yeNtengiso yeAmazon
Ukuqalisa ngeNgxelo yakho yeSellics Benchmarker
Nje ukuba ufake isicelo sakho Iwebhusayithi yeSellics, uya kufumana ingxelo yakho yasimahla kwiiyure ezingama-24. Xa uvula ingxelo, uya kubona ibheji yokusebenza kwikona ephezulu ngasekunene ikunika amanqaku apheleleyo eakhawunti. Kwangoko, ufumana umbono omkhulu wendlela oqhuba ngayo kunye nento yakho Ukukhula okunokubakho na.
Iibheji ezahlukeneyo zibonisa ukuma kweakhawunti yakho ngale ndlela ilandelayo:
IPlatinam: I-10% ephezulu yabalingane
Igolide: I-20% ephezulu yoontanga
Isilivere: Phezulu kwe-50% yoontanga
Ubhedu: Ezantsi ngama-50% oontanga.
Icebo lokunceda: Sebenzisa incwadi iqhosha lokufowuna kwincoko yasimahla kunye nomnye weengcali zentengiso ye-Sellics 'Amazon. Bangakunceda ukutolika eyakho I-Benchmarker yokuThengisa xela okanye ndikuxelele ngakumbi malunga nendlela onokuthi usebenzise ngayo iiSellics ukwandisa amaphulo akho entengiso.
Ngaphantsi nje uya kufumana icandelo lesishwankathelo, elibonisa ukusebenza kwakho iyonke kunye nezona zalathisi zeNtsebenzo eziPhambili (Ii-KPI) ngokukrwaqula kanye. Ungasebenzisa iqhosha elingasentla ekunene ukukhetha ukuba ungathanda na ukuthelekisa ukusebenza kwakho nebenchmarks ezifanelekileyo okanye kwinyanga edlulileyo.
Qonda utshintsho kwi-KPIs yeNtengiso yeAmazon
Ii-KPI ezikumgangatho ophezulu njenge-ACoS ziphenjelelwa zizinto ezininzi ezahlukeneyo, kunokuba nzima ukwazi ukuba yintoni ebangela utshintsho ekusebenzeni.
Ifunnel yokusebenza ilungile kuba
Ungazibona zonke ii-metrics zakho kwindawo enye.
Ifaneli ibonisa indlela nganye yeemetrics kwii-KPIs zakho, ikuvumela ukuba uchonge ngokulula ukuba yintoni ebangela utshintsho.
Kumzekelo wengxelo yedemo engentla, unokubona ukuba i-ACoS inyukile kuba inkcitho yentengiso yonyuke ngaphezu kokuthengiswa kweentengiso. Ngapha koko, ndiyabona ukuba ukuhla kwezinga lokuguqulwa kunye nexabiso eliphakathi (I-AOV) kubanjwe ukuthengiswa kweentengiso.
Qiniseka ukuba ucofa i Utshintsho lweNyanga ngaphezulu kweNyanga iqhosha elingaphantsi kwefaneli ukujonga ukusebenza kwakho ngexesha.
Chonga iiMveliso zeAmazon ezinempembelelo enkulu (elungileyo okanye engalunganga)
Ne Uhlalutyo lwempembelelo yoMqhubi, unokubona ngokukhawuleza ukuba zeziphi iimveliso ezincedisa kakhulu-zombini ngokufanelekileyo (eziluhlaza) kunye nezibi (obomvu) - kwiinguqu zakho zokusebenza kwenyanga-ngenyanga kuzo zonke ii-KPI eziphambili, kubandakanywa i-ad spend kunye ne-ACoS.
I-Impact Driver Analysis iya kuphendula imibuzo ephambili, njengo:
Kutheni intengiso yam yonyuka/yehla?
Zeziphi iimveliso ezibangele ukwehla / ukonyuka kwe-ACoS, ukuthengiswa kweentengiso?
Inyuke phi iCPC yam kule nyanga iphelileyo?
Usebenzisa naziphi na iitshathi ezintathu zesi sixhobo (ingxangxasi, imephu yomthi, okanye itafile yemveliso), unokukhawuleza uchonge abona badlali banamandla kunye namathuba akho makhulu okwenza.
Esi sisixhobo esiyimfuneko kuye nawuphi na umthengisi!
Fumana i-Deep-Dive kwii-ASIN zakho eziphezulu ezili-100
Icandelo lokuhlalutya iMveliso liyinxalenye endiyithandayo yesixhobo kuba ibonelela ngedatha yokusebenza ye-ASIN-level. Kanye njengefaneli yokusebenza, uyilo lukuvumela ukuba wenze lula uhlalutyo olunamandla, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kulula ukuyiqonda.
Okokuqala, ndithanda ukusebenzisa i Iifayile iqhosha lokuhluza ubuncinci benkcitho yentengiso. Ngale ndlela, ndiyazi ukuba ndilungiselela iimveliso ezinempembelelo enkulu ekusebenzeni ngokubanzi.
Emva koko ngeemveliso eziseleyo, ndijonge kwizangqa ezinemibala ecaleni kwe-KPIs ukubona ukuba zingaphezulu okanye zingaphantsi kwebhentshi yodidi olungaphantsi. Inkqubo yokufakwa kwekhowudi yombala isebenza ngolu hlobo lulandelayo:
Luhlaza: ukwi top 40% = umsebenzi omhle
Mthubi: uphakathi 20% = kufuneka uphucule
Ubomvu: ungaphantsi kwe-40% = unamathuba amakhulu okukhula.
Ngenxa yokuba i-ACoS ixhomekeke kwinqanaba lokucofa (CTR), izinga lokuguqulwa (CVR), kunye neendleko ngokucofa (CPC), ndihlala ndijonge amachaphaza abomvu kwaye atyheli ecaleni kweCTR, CVR, okanye CPC yam, emva koko ndiqale. ukwenza abo bane Isoftware yeSellics.
Ngelixa awuyidingi isoftware yeSellics ukuba fumana ingxelo yakho yeSellics Benchmarker yasimahla, Ndiyayincoma ngokuqinisekileyo! Bane-automation kunye neempawu ze-AI ezisebenzisa amandla edatha enkulu ukwenza konke okukuphakamisela nzima.
IQhinga lePhulo elikwiNqanaba eliPhezulu
I-intanethi igcwele iingcebiso malunga nendlela yokwandisa ii-KPIs zakho, kodwa bambalwa kakhulu abantu abaya kungena kwiindongomane kunye neebholithi zendlela omele ucwangcise ngayo imikhankaso yakho yentengiso. Ngaphandle kokuba ubahlawula imali eninzi, oko kukuthi.
Le yenye indawo apho iSellics Benchmarker inika ixabiso elimangalisayo. Icandelo le-Akhawunti yeSakhiwo likunika imboniselo iyonke yendlela iakhawunti yakho imiselwe ngayo kwaye uyithelekisa nezinye iiakhawunti eziqhuba kakuhle.
Isixhobo sibala iimetriki ezintathu ezahlukeneyo: amaqela e-ad / iphulo, i-ASINs / iphulo, kunye namagama angundoqo / iphulo. Emva koko ikunika "amabanga" ekulula ukuwafunda kwinqaku ngalinye. Isistim yokuhlela isebenza ngolu hlobo lulandelayo:
yellow: cinga ukwenza utshintsho oluthile
obomvu: kuya kufuneka uhlengahlengise amaphulo akho.
Ngaphandle kokuba ungumthengisi onemali engaphezulu kwe- $10,000 kwintengiso ngenyanga, nantsi eminye yemigaqo jikelele esicetyiswa sisixhobo.
Amaqela entengiso/Iphulo: Ukuba namaqela eentengiso ambalwa ngephulo ngalinye kuya kukunika ulawulo olungaphezulu kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho.
Ii-ASIN ezipapashiweyo/iQela leNtengiso: Kuninzi lwabathengisi, ukuya kuthi ga kwi-5 epapashiweyo ye-ASIN ngeqela ngalinye lentengiso iya kulunga.
Amagama angundoqo/Iqela leNtengiso: Kuninzi lwabathengisi, phakathi kwe-5 kunye ne-20 amagama angundoqo kwiqela ngalinye lentengiso liya kusebenza ngcono.
IAmazon Ad Format Deep-Dive
Kubathengisi abasebenzisa iiMveliso eziXhasiweyo zombini kunye nomboniso oXhasiweyo, ifomathi yentengiso nzulu-dive mhlawumbi yenye yezona ndawo zibalaseleyo ze ingxelo yeSellics Benchmarker.
Umzobo ubonisa ukusasazwa kwenkcitho yam yentengiso xa kuthelekiswa nebenchmark yodidi, ukuze ndibone ngokulula ukuba ndingaqwalasela ukutyala imali ngaphezulu okanye ngaphantsi kuhlobo lwentengiso.
Ukuskrolela ezantsi, ungafumana i-ad-format-level KPI amabanga kunye neBenchmarks. Ukuba ucofa kwi "+" iqhosha ecaleni kwayo nayiphi na enye ye-KPIs uya kukwazi ukwenza uhlalutyo lwenqanaba le-ASIN le-ASINs oyibhengezayo ngeeMveliso eziXhasiweyo.
Omnye weyona miba mikhulu yeSellics Benchmarker kukuba emva kokuba ubhalisele ingxelo yakho yokuqala, uya kufumana ingxelo rhoqo ngeentsuku ezingama-30 equlethe idatha yenyanga edlulileyo. Ngale ndlela, unokuqhubeka nokwenza ngcono kunye nokulungisa kakuhle iakhawunti yakho ukufikelela kwiinjongo zakho zentengiso yeAmazon.
Ixabiso elinikezelwa sesi sixhobo likhulu kakhulu. Fumana ingxelo yakho yeSellics Benchmarker yasimahla namhlanje ukuthatha intengiso yakho ukuya kwinqanaba elilandelayo kwaye ukubetha ukhuphiswano.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyenzayo: Ndililungu le Sellics.
tags: intengiso yeAmazonIiMveliso eziXhasiweyo zeAmazonIimveliso ezixhasiweyo ze-Amazonabathengisi
Amanyathelo amahlanu onokuthi uwathathe namhlanje ukukhulisa intengiso yakho yeAmazon
Ngaba i-Apple's Mail Privacy Protection (MPP) iyichaphazela njani iNtengiso ye-imeyile?